Minisitra Rolly Mercia : Niantso fitoniana ho an’ny mpanao gazety -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisitra Rolly Mercia : Niantso fitoniana ho an’ny mpanao gazety
Notontosaina tamin’ny fomba ofisialy omaly tany mahajanga ny andro iraisam-pirenena ho an’ny asa fanaovan-gazety. Taorian’ny nanendrena an- dRahajason Harry Laurent ho ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana dia ity no fivoahany voalohany teo anatrehan’ny mpanao gazety . Nanamafy ny minisitry ny serasera nandritra ny fankalazana fa tsy misy intsony mpanao gazety hampidirina am-ponja eo am-panatanterahana ny asany. Nisy ihany koa ny antso natao ho an’ireo mpanao gazety rehetra matianina amin’ny firaisan-kina sy fiaraha- miasa indrindra ny fifanomezan-tanana hanomezana hasiny indray ny asa fanaovan-gazety malagasy
Omaly, nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny asa fanaovan-gazety tany Mahajanga no nanamafisan’ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana Harry Laurent Rahajason ny fahavonony hitondra fanatsarana eo amin’ny asa fanaovan-gazety. Izany no natao dia mba ahafahana manao ny asa fanaovan-gazety ho fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Ny minisitra izay fantatra fa sarotiny sy hentitra ary masiaka toetra, novoaboasany manokana aza ny toetrany fa tahaka ireny fitaovana goavana ho entina mitrongy tany ireny na ‘’tanky , bildozera’’ eo am-panatanterahana ny asa nankinina taminy. Omaly anefa, tsy izay no tazana fa ilay Rolly Mercia minisitra mandefitra, azo ifankazoana sy ifanakalozana ary mihaino sy te hiara-hiasa amin’ireo mpanao gazety matianina rehetra mba hitondra fampivoarana goavana “hiara- hiasa miaraka isika ary ny fahaiza- manao ananantsika rehetra dia hatao anatina fanajana ny etika sy deontologika ny asa fanaovan-gazety” hoy hatrany ny ministra nandritra ny fandraisam-pitenenany . Ho mafy ihany koa ny asa mbola miandry ny ministry ny serasera eo amin’izay fanatsarana ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety izay , indrindra ny fitaritana ireo mpanao gazety hanao ny asany araka ny tokony ho izy sy hanaraka ny lalàna velona. Ny lohahevitra nentina nandritra ny fankalazana rahateo dia ny hoe ‘’toe tsaina tia tsikera amin’ny fotoana tokony hitsikerana ny anjara asan’ny mpanao gazety, ho an’ny fampivoarana ny fiarahamonina milamina, marina ary miray’’.Lohahevitra izay natao hamerenana ny votoatin’ny asan’ ny mpanao gazety raha- teo io lohahevitra io.nandritra ny fankalazana dia nisy ny diabe nitety ny tanàna, fanatanjahan-tena toy ny “zoumba” izay nandraisan’ireo mpanao gazety manerana ny faritra maro anjara. Taorian’izay kosa dia nisy ny lohahevitra narahina ady hevitra mikasika ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety eto Madaagasikara.
‘’Tsy afaka atao samirery anefa ny fanatsarana ny asa fanaovan-gazety, ilaina ny firaisan-kina ahafahana manatanteraka izany, hifanampy sy hifanome tanana isika mba ahazoana tontolo feno fitoniana’’ hoy hatrany ny ministra.Ity farany izay nampahatsiahy ny olana sy fifandirana anatiny misy eo amin’ny asa fanaovan-gazety mampihemotra ny ezaka efa vita. ‘’ ny tsikera izay mahatonga famonoana ary ny ankabeazan’ izy ireny izay foronina . Voatery hiara- hiasa miaraka ny rehetra noho izany ,mba ametrahana tontolo anjakan’ny firahalahiana sy fihavanana’’ nanamafy hatrany ny minisitra. Nanatitrantitra, noho izany, ny ministry ny serasera fa efa misy ny vinavina fitsidiana faritra maro ahafahana mifanakalo sy maka ny hevitr’ireo rehetra voakasiky ny asa fanaovan-gazety . Hapetraka, noho izany, ny vovonana ifampiresahana izay ahitana ireo tompon’andraikim-panjakana sy ny avy amin’ny mpanao gazety mba ahafahana mahazo tsao-kevitra entina hanatsarana sy hanomezana hasina indray ny asa fanaovan-gazety. Nampahatsiahivin’ny ministra ihany koa nandritra ny fankalazana, ny tena votoatin’ny atao hoe fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Araka ny fanazavany dia misy ny arofanina sy fitsipika ary lalàna mifehy ny asa.’’Ny ady atao amin’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy , ary misy ireo izay manararaotra izany mba hiadiany ny tombotsoany .Maro ireo mpanao gazety no tsy manantanteraka intsony ny asany araka ny tokony ho izy ary mihevitra fa afaka manao izay tiany.Ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety izay miara-dalana hatrany amin’ny fanajana ny etika sy ny deontolojika hoy hatrany ny ministry ny serasera.
Fanohanan’ny firenena mikambana
Nandritra ny fankalazana no nilazan’ny mpandrindra ny rafitry ny firenena mikambana eto Madagasikara ny fanamafisany ny fanohanana sy fiarahana amin’ny mpanao gazety malagasy. Omaly dia nisy ny fanaovan-tsonia teo amin’ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana ary ny rafitry ny firenena mikambana . Ny ahafahan’ireo mpanao gazety mpianatra asa mahazo fiofanana ahafahana manamafy ny fahaiza-manaon’izy ireo no tanjona ao anatin’io fifanarahana io, eo ihany koa ny fanolorana fitaovana ho an’ny ORTM na ny office de la radio et television malagasy.’’ ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety dia taratry ny demokrasia ary nampiseho ny fahavononany amin’ny fiaraha- miasan’ ny minisitera ahatongavana amin’ izany. Raha ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara dia mbola milamina. Tiako ny mamerina sy manamarika etoana fa aman-jatony ny mpanao gazety no maty, anjatony ihany koa no vaofonja. Ny faramparan’ny taona teo izany izay mbola tsy mitranga eto Madagasikara’’hoy ny hatrany ny mpandrindra maharitry ny firenena mikambana. Mikasika ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety indray ,dia faha 56 i Madagasikara amin’ ireo firenena 180. Mbola ilana ezaka io laharana io indrindra fa efa mihatra eto Madagasikara ny tsy fanagadrana mpanao gazety.
Fampidirana am-ponja mpanao gazety
Omaly , dia nanamafy tamin’ireo mpanao gazety ny minisitry ny serasera fa tsy hita ao anatin’ny lalàna vaovao mifehy ny serasera intsony ny fanagadrana mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany. ’’ Lalàna izay niteraka tsy fitovian-kevitra. Samy manana ny fomba andikany azy ny tsirairay ary mino aho fa betsaka ireo mpanao gazety no tsy mahalala sy mahafantatra ny voarakitr’io lalàna io, antony mahatonga ny fifandirana ara-kevitra’’raha ny fanazavan’ ny ministry ny serasera hatrany. Hisy ny vovonana iadiana hevitra mikasika ny lalàna mifehy ny serasera izay hapetraka ary eo ihany koa ny fanazavana amin’ny antsipirihany ny voatoatin’io lalàna io